China Ifoni Ibhande lefektri abakhiqizi | SJJ
Intelezi yefoni, umucu wefoni, umucu we-loop yocingo noma yini oyifunayo, uqinisekile ukuyithola efektri yethu. Kutholakala ngezinto ezahlukahlukene, isiphetho, imibala nezinsiza.
Sisebenza ngokukhiqiza umucu wamaselula futhi besithumela wonke umhlaba amashumi eminyaka, lowo siwenzile ngobubanzi obukhulu obutholakala ngosayizi ohlukile, imiklamo nezitayela. Sinikeza ngemiklamo yangokwezifiso imichilo yeselula esezingeni eliphezulu kumakhasimende womhlaba wonke, noma ngabe idizayini yakudala noma imfashini esingakusiza ukuthi uyiqede. Sinikeza izinketho zePatone Colour Chart nezinsiza zokudala izintambo zakho zomakhalekhukhwini.
Imichilo yamaselula ilungele omakhalekhukhwini, abadlali be-mp3 / 4, ikhamera, ukhiye wetiye namanye amadivayisi, anembobo noma iluphu. Ibhande elihlala isikhathi eside futhi elinethezekile ongalilengisa esihlakaleni sakho, uvimbele ukuthi idivayisi yakho ingawi phansi ngengozi futhi igcine idivayisi yakho iphephile lapho uyisebenzisa, futhi vumela isithupha sakho siqonde emaphethelweni, ungasifaka ngokushesha futhi kalula. Kunezitayela eziningi zezintelezi ezitholakalayo, ezinjengezinhlamvu ezincane zezithombe, izintelezi zekristalu ezibabayo, nezintelezi zezilwane ezincane ezintweni ezahlukahlukene. Ezinye izintelezi zingakhanya noma zikhanyise lapho kukhala ifoni. Izintelezi eziningi zinezinsimbi ezincane ezinamathiselwe noma izinhlamvu ezivela kuma-franchise athandwayo akamuva, njenge-super star ethandwayo noma ividiyo eshisayo ngisho nemidlalo, ukuthi kungaba yisinqumo esihle sowesilisa nowesifazane sokuhlobisa futhi esivelele empilweni yabo, kukhona futhi ezinye izintelezi lapho umuntu angafaka khona umunwe ukuhlanza isibonisi sedivayisi. Ngakho-ke noma ngabe uyini umbono wakho, wamukelekile ukuhlanganyela nathi futhi sizokwenza ngokoqobo.
Izinto: I-PVC eguquguqukayo, Abicah, Isikhumba, i-eco-friendly futhi engeyona enobuthi
Isitayela: Izitayela ezahlukahlukene ozikhethele noma zenziwe ngendlela oyikhethile.
Izesekeli: Intambo yefoni ephathekayo, indandatho yomumo ka-D, i-rivet, isiqeshana se-lobster namasongo we-2 weqa.
Imichilo yefoni iyashisa futhi ilungele ibhizinisi, ukukhushulwa, ukukhangisa, isikhumbuzo, ezemidlalo nemicimbi.
Langaphambilini Amapensela Amabhokisi Nezimo Zepensela
Olandelayo: Isikrini sokuhlanza ifoni